ကားလေးဖြတ်သန်းရာ လမ်းတလျှောက်ကိုကြည့်လိုက်မိတော့ တိုက်တာအဆောက်အဦးတွေက အရင်ကထက် ပိုမိုတိုးတက်လာခဲ့သည်ကို သတိထားမိသည်။ ခေတ်စနစ်ရဲ့ တိုးတက်မူတွေနောက်လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲခဲ့ရပေမဲ့ အရင်ရှိခဲ့တဲ့ ရိုးသားတဲ့ စာရိတ္တလေးတွေကိုတော့ ကျနော်မပြောင်းလဲစေချင်ပေ... ရိုးသားတဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုတွေကိုလည်း အရင်အတိုင်းရှိနေစေချင်သည်။ ဈေးကိုဖြတ်သွားတော့ ချစ်စရာတိုင်းရင်းသူတွေရဲ့ ဖြူစင်တဲ့အပြုံးတွေကိုလဲ ကားပေါ်မှ ဖြတ်ခနဲ တွေ့လိုက်ရသေးသည်.... အိမ်ရှေ့မှာ ကားရပ်လိုက်သည်နှင့် တဦးတည်းသော အမနဲ့ကလေးတသိုက်ထွက်လာသည်။ အော် ကလေးတွေကိုမြင်မှ ငါလဲ ဦးလေးဘ၀ကို အလိုလိုနေရင်းရောက်နေပါ့လားလို့ တွေးမိသား..... ဘာလိုလိုနဲ့ အမေတောင်မှ အဖွားအဖြစ် တဆင့်တိုး တာဝန်တွေ ယူနေရပါ့လား... အိမ်ရှေ့ခြံတံခါးကနေအထဲကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ အိမ်တံခါးဘေးမှာ မတ်တပ်ရပ်နေသော အမေ့ကိုတွေ့ရသည်..... ပါးပြင်မှာ မျက်ရည်စတွေနဲ့ ၀မ်းသာလွန်းလို့ အမေငိုနေပြီ အော် အမေရယ် အရင်တုန်းလို စိတ်ကငိုလွယ်ရီလွယ်ပါပဲလား... လူအများရှေ့ရောက်ရင် ပြတ်သားတတ်သလောက် တကယ့်နှလုံးသားက ပျော့ပြောင်းနေဆဲပါ့လား အမေ.....
အိတ်တွေကိုချ အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ထွေရာလေးပါးစကားတွေ ပြောနေကြတာ မောတာတွေလဲ ဘယ်ဆီပျောက်မှန်းမသိတော့ အမေကတော့ ကုလားထိုင်လေးပေါ်မှာထိုင်ပြီး ချစ်သားရဲ့ခေါင်းလေးကို ကိုင်ရင်း သားပြောသမျှကို ပြုံးရွှင်စွာနဲ့ နားထောင်နေတာပဲ... ချစ်စရာ တူလေးတွေနဲ့ပျော်ရွှင်ဖွယ်အမတို့ မိသားစုရဲ့ဘ၀ကိုကြည့်ပြီးလဲ အဝေးရောက်လူတယောက်အနေနဲ့ ထူးဆန်းနေမိသလိုလို... ဒီလို ပျော်ရွှင်ဖွယ်မိသားစုလေးနဲ့ မဆုံဆည်းဖြစ်တာ နှစ်တွေလဲ မနဲတော့ဘူးလေ.... ဒီလိုနဲ့စကားတွေ ပြောပြီး ခဏနားတရေးအိပ်ပြီး ညနေရောက်တော့ အမေရဲ့ မစားရတာကြာပြီဖြစ်သော ငါးခေါင်းဟင်းချိုလေးနဲ့ ထမင်းကိုစား... လူစုံစွာနဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ထမင်းဝိုင်းလေးမှာ အပျော်ဆုံးလူသားကတော့ အမေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်... ထမင်းစားပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေလာခေါ်လို့ ကျနော်တို့မြို့ရဲ့ ညအလှဆည်းဆာကို ခံစားဖို့ထွက်ခဲ့ပြန်သည်... ရောင်စုံမီးတွေကြားထဲက မြို့ငယ်လေးတခု သာမာန်လူတွေအတွက် ဘာမှ အနှစ်သာရမရှိတဲ့ မြို့ငယ်လေးဖြစ်ပေမဲ့ ကျနော်တို့တောင်ပေါ်လူတွေ ရင်ထဲမှာတော့ ဒီမြို့လေးသည် ကျနော်တို့ဘ၀.... ကျနော်တို့အားမာန်တွေကို မွေးဖွားပေးခဲ့သည့်မြို့လေး....
ညဈေးရဲ့ လမ်းဘေးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးရဲ့ ထောင့်တနေရာကိုယူပြီး ခေါပုတ်ကင်လေးကိုစားလို့ လက်ဖက်ရည်လေးရဲ့ အရသာကို ဇိမ်ခံရင်းသူငယ်ချင်းတွေ ဟိုအရင်ကအကြောင်းတွေ ပြောလိုက် ကိုယ်တွေဘ၀ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်ပြောလိုက် ငယ်စဉ်က ချစ်သူတွေအကြောင်းပြောလိုက်နဲ့ ပျော်ရွှင်စရာလေးတွေနဲ့ အချိန်ကိုကြည့်တော့ ညမိုးချုပ်နေပြီ အိမ်အပြန်လမ်းတွင်တော့ အရင်တုန်းကအတိုင်း မှောင်အတိလမ်းလေးမှာ သူငယ်ချင်းတသိုက် စလိုက်နောက်လိုက်နဲ့ ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသည်.. အိမ်ရှေ့တံခါးကို ခေါက်မလို့ရှိသေး အမေ့ရဲ့အပြုံးတွေနဲ့အတူ တံခါးဖွင့်ပေးမှုက ဆီးကြိုနေသည်။ တညလုံး အမေ့ရဲ့ကုတင်လေးပေါ်မှာ သားအမိနှစ်ယောက်တူတူ အိပ်လို့ဘ၀ရဲ့အကြောင်းတွေ ပြောရင်းအမေ့ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ ကလေးလေးတယောက်လို့ နွေးထွေးမှုတွေယူရင်းအိပ်မောကြခဲ့သည်။ တူတော်မောင်တွေကတော့ သူတို့အဖွားနားကပ်နေသော ကျနော့်ကို စိတ်ဆိုးနေရော့မည်.....
မကြားရတာကြာပြီဖြစ်သော အမေ့၏အော်သံလေးကြောင့် ကျနော်အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်နေရာကနေ နိုးထလာခဲ့သည်။ နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ မနက် ၇ နာရီပင်ကျော်ကျော်လေးပင်ရှိသေးသည်။ နောက်ထပ် ၁၅မိနစ်လောက် ပြန်အိပ်ဦးမှဟုတွေးကာ စောင်ကို ခေါင်းမြီးခြုံပြီး ကွေးနေမိသည်။ သားကြိုက်တဲ့ တို့ဟူးနွေး ၀ယ်ထားတယ် ဆိုသော အမေ့စကားသံကြောင့် ကျနော်မထချင် ထချင်နဲ့ထလာရသည်။ မျက်နှာသစ်ရန် အိမ်ပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့ အေးမြတဲ့ ဆောင်းလေတွေက လူကိုလာကျီစယ်နေပြန်သည်။ အေးမြတဲ့လေနှင့်အတူ မြေရနံ့သင်းသင်းလေးကိုလဲ ခံစားမိသလိုလို.. ရေပီပါထဲက ရေကိုလှမ်းခပ်လိုက်တော့ ရေခဲတမျှအေးနေသည်ကို သတိထားမိသည်။ ဒီလိုအထိအတွေ့ကို ကျနော်မခံစားခဲ့ရသည်မှာ ၅ နှစ်လောက်တောင် ရှိခဲ့ပါ့လားဟု တွေးနေမိပြန်သည်။ သွားတိုက် မျက်နှာကို အမြန်သစ်ပြီး အိမ်ထဲဝင်လာတော့ အမေပြင်ပေးထားသည့် မနက်စာက အဆင့်သင့် ကျနော်ကြိုက်တတ်သော အချိုရည်မပါသည့် တို့ဟူးနွေးနှင့် ပဲပြုတ်ထမင်းကြော်... ပြီးတော့ တောင်ပေါ်လက်ဖက်ခြောက်နဲ့ ငါးရံ့ခြောက်ဖုတ်မွှေးမွှေးလေး.....
တီ...တီ... တီ..တီ...တီ တီ...တီ... တီ..တီ...တီ..တီ..တီ..တီ.. တီ...တီ... တီ..တီ...တီ တီ...တီ... တီ..တီ...တီ..တီ..တီ..တီ..
စူးရှသော အသံကြောင့် လူက ၀ုန်းခနဲ ထထိုင်မိလေသည်... ဘေးဘီကိုကြည့်မိလိုက်သော မျက်စိထဲ အသားကျနေသော မမြင်ချင်သည် မြင်ကွင်းတွေ... ကျဉ်းမြောင်းလှသည့် ထောင်သာသာ အခန်းကျဉ်းလေးထဲ မဆံ့မပြဲထည့်ထားသော လူတွေနဲ့ အ၀တ်တွေ၊ ပွစိကျဲနေသာ စာရွက်၊စာအုပ်တွေနဲ့ ကွန်ပြူတာတွေ... သြော်.... ငါအိပ်မက် မက်နေတာပါ့လား.... နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ မနက် ၈း၄၅... သြော် စင်ကာပူရောက် လူသားတယောက်ရဲ့ဘ၀တွေပါ့လား..... အိပ်မက်တို့ကို မပျောက်ပျက်စေလို ဒီလိုအိပ်မက်မျိုးဘယ်တော့မှ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်မသိ... ဤအိပ်မက်ကို သိမ်းထားလို့ရရင် သိမ်းထားလိုက်ချင်သည်... ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်... ဖုန်းကိုကောက်ကိုင် မက်ဆေ့တစောင်ရေးပြီး ပို့လိုက်သည် အလုပ်က မန်နေဂျာဆီသို. ....... စောင်ကို ခေါင်းအထိလွှမ်းခြုံပြီး အိပ်မက်ကို ဆက်လက်မက်နိုင်စေရန် ကျနော် အကောင်အထည်ဖော်တော့သည်.... သည်လိုနဲ့ ကျနော်ရဲ့ ခွင့်ရက်တွေလဲ တရက်ပြီး..တရက် ကုန်ဆုံးခဲ့ပြန်သည်... ဒါပေမဲ့ ကျနော် ကျေနပ်ပါသည်.....
စာကြွင်း။ ။ နေ့အိပ်မက် ရဲ့ အိမ်လွမ်းသူဆိုတဲ့ Tag ပိုစ့်လေးဖြစ်ပါသည်။ သူရေးစေချင်တာက ဘာကိုလဲတော့ ကျနော်မသိပါဘူး.. ကျနော်လွမ်းသော ကျနော်ချစ်သော မြို့လေးကိုပဲ ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ အားလုံး နားလည်ပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ Tag တွေ များနေပါတယ် အကြွေးပိနေပါတယ် နောက်ထပ် ၃ ခုလောက် ကျန်ပါသေးတယ် တဖြည်းဖြည်းရေးပါ့မယ်လို့ နောက်ကျရင် ခွင့်လွှတ်ပါလို့.... ပြန်မ Tag တော့ပါဘူးး)
ပုံကို Google မှ ယူထားပါတယ်။
Posted by တောင်ပေါ်သား at 11:55 PM | Labels: Tag ပိုစ့်လေး, ကဗျာများ
for me , worse than you, 15 years...
my parents are so old..
wanna meet with them..
but no way for me..
i m working here for them..
ပြန်ပေါ့ လွမ်းရင် အဟတ်
ဒီပိုစ့်ကို လေ အရင်ကလည်းတစ်ခါ ဖတ်ဖူးလားလို့ ပါ
အော် အဲ့တုန်းက ပိုစ့်က တစ်ခြားဟာပါ
မနက်ခင်း ကနေ စထားတာလေ
မနက်ခင်းအလှကို ဖွဲ့ ထားတာ
ကမွတ်ဆိတ် ဟုတ်တယ် ဟုတ်
ပြန်လိုက်ပါ ခဏလေးဖြစ်ဖြစ် အလွမ်းပြေတာပေါ့
ဘယ်လို ကွန်မန့် ပေးရမှန်း
ဖတ်သွားတယ် ပဲ ပြောတော့မယ် ..
တကယ် ပြန်သွားတယ် ထင်နေတာ ..
ဘယ်တုန်းက ပြန်သွားတာပါလိမ့်ပေါ့ ...
same as you cos same home town. I miss home. There is an Old Man & an Old Lady, every day waiting for their home coming son. But I don't know when I can go back again.
အိမ်ပြန်ရတာ အဲလောက်မခက်ပါဘူးကွာ။ ကုန်ကျစရိတ်တော့ နည်းနည်းများမှာပေါ့။
တကယ်ပြန်ချင်စိတ်ရှိရင် ခဏအလည်ပြန်ဖို့ အားပေးပါတယ်။ မပြန်တာ တော်တ်ေကြာပြီ မို့လား.